Ụdị COVID-19 Omicron ọhụrụ dị na UK, Belgium, Germany, Netherlands na Czech Republic ugbu a
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Europe » Ụdị COVID-19 Omicron ọhụrụ dị na UK, Belgium, Germany, Netherlands na Czech Republic ugbu a
Airlines • Airport • Aviation • Akụkọ kacha ọhụrụ na Belgium • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa na Czechia • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • Akụkọ na -agbasa ozi Netherlands • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ UK na -agbasa
United Kingdom edebanyela aha ikpe abụọ mbụ nke ụdị Omicron ọhụrụ nke COVID-19 otu ụbọchị ka edechara ikpe mbụ nke ụdị ahụ, nke ndị sayensị chere na ọ nwere ike na-efe efe karịa, na Europe.
Taa, onye na-ekwuchitere Ministri Ahụike Czech kwupụtara na otu nwanyị si ezumike na-alọta na Egypt nwalere ihe ziri ezi maka ihe ekwenyere na ọ bụ ụdị akwụkwọ akụkọ COVID-19. Ọ gbakwụnyere na a na-amụkwu ihe nlele ahụ, yana nkwenye gọọmentị na-atụ anya n'ụtụtụ Sọnde.
Ndị ọchịchị Belgian na German na-akwadokwa ọbịbịa Omicron na kọntinent Europe.
N'ikwekọ na akụkọ ahụ sitere na Czech Republic, Kai Klose, onye minista na-ahụ maka mmekọrịta ọha na eze na ntinye aka na GermanyMpaghara Hesse, tweeted na "Omicron variant abanyela na Germany, nke nwere nnukwu ohere nke ukwuu." Klose kpughere na "a hụrụ ọtụtụ mmụgharị ụdị nke Omicron na onye si South Africa" ​​n'abalị Fraịde. Edebere onye ahụ n'ụlọ iche iche ka ọ na-eche usoro nje virus a chọtara na nlele ha.
Ndị ọchịchị na Netherlands na-eche ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị a na-enyo enyo na Omicron ihu na Fraịde, mgbe mmadụ 61 rutere Amsterdam si South Africa nwalere ihe dị mma maka COVID-19. E bugara ndị njem ahụ n'ọdụ ụgbọ elu gaa n'otu ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị nso ma dịpụrụ adịpụ n'ebe ahụ. Ministri ahụike Dutch kwuru na a na-amụ ihe nlele “ngwa ngwa o kwere mee [iji hụ] ma ọ bụ ụdị nchegbu ọhụrụ a na-akpọ ugbu a 'Omicron'.
Tupu ụbọchị ahụ, gọọmentị Dutch machibidoro njem ụgbọ elu niile si South Africa bụ ebe mbụ ahụrụ ụdị nje a. Ndị njem n'ụgbọ elu abụọ ikpeazụ si ebe ahụ na-abata ga-anọrịrị ọtụtụ awa n'okporo ụzọ ụgbọ elu, na-eche ka a nwalee ya.
Belgium nwere ọdịiche dị egwu nke ịbụ mba mbụ na Europe gosipụtara n'ihu ọha ikpe Omicron. Onye minista ahụike nke obodo ahụ, Frank Vandenbroucke, kwupụtara na Tọzdee na onye ọrịa butere ọrịa ahụ bụ onye na-enwetaghị ọgwụ mgbochi nke nwalere ihe dị mma maka COVID-19 na Nọvemba 22. Dị ka onye isi na-ahụ maka nje virus na Belgium, Mark Van Ranst si kwuo, onye ezumike ahụ esila Egypt lọta na mbụ.
Ternyaahụ, na Ụlọ Ọrụ Europe Maka Mgbochi Ọrịa na Njikwa (ECDC) dọrọ aka ná ntị na a ka nwere "oké ejighị n'aka metụtara nnyefe, irè ọgwụ mgbochi ọrịa, ihe ize ndụ maka reinfections na ihe ndị ọzọ nke Omicron variant." Ndị ọrụ ahụike EU kewara ụdị ahụ dị ka ihe egwu “dị elu ruo nke ukwuu”.
N'otu ụbọchị ahụ, mba 27 niile so na EU kwetara ka ha kwụsị njem ụgbọ elu si mba asaa ndịda Africa ruo nwa oge. UK, US na Canada nyekwara iwu mgbochi ndị a.